Okwu Eze Gbehanzin na Jenụwarị 20, 1894 - Afrikhepri Fondation
Fraide, Machị 5, 2021
Na-agụ: 3 min
CAnyị na-eso nsogbu, ndị enyi anyị ikpeazụ kwesịrị ntụkwasị obi, ị maara n'okpuru ọnọdụ dị a ,aa, mgbe ndị France chọrọ ijide ala ndị nna nna anyị, anyị kpebiri ịlụ ọgụ. Anyi nwere mgbe anyi ji n’aka duru ndi agha anyi gaa na mmeri. Mgbe ndị agha m biliri na otu puku iji chebe Danhomè na eze ya, ejiri m mpako mata ụdị obi ike nke ndị Agadja, Tégbessou, Ghézo na Glèlè gosipụtara. N'agha niile m nọ n'akụkụ ha.
N'agbanyeghị ikpe ziri ezi nke ihe kpatara anyị, na ike anyị, e mebiri ndị agha anyị n'otu ntabi anya. Ha enweghị ike imeri ndị iro ọcha bụ ndị anyị na-aja obi ike na ọzụzụ ha. Ugbua olu m na-ebe ákwá anaghịzikwa ebido ụda.
Ebee ka ndi mmadu ndi mmadu no na-aru oku iwe ugbu a?
Ebee ka ndị isi ha na-enweghị isi: Goudémè, Yéwê, Kétungan?
Ebee, ndi agha ha siri ike: Godounu, Chachabloukou, Godjila?
Ònye ga-abụ abụ ha dị mma? Ònye ga-ekwu mmesapụ aka ha?
Ebe ọ bụ na ha ejiri ọbara ha kaa akara nke nkwekọrịta kachasị elu, olee otu m ga-esi anabata enweghị ha ịṅụ ọgwụ ọjọọ?
Kedu ka m ga - esi pụta n'ihu gị, ndị dike, ma ọ bụrụ na m debanyere akwụkwọ akụkọ General?
Mba! Agaghị m atụgharị azụ na akara aka m. M ga-eche ihu na m ga-eje ije. N'ihi na enweghi mmeri kacha mma na ndị iro ma ọ bụ ndị mmegide a mara ikpe na mkpọchi nke ụlọ mkpọrọ ahụ. N'ezie onye nwere mmeri bụ nwoke ahụ a hapụrụ naanị ya na onye na-agbasi mgba ike n'obi ya. Achọghị m ka onye ọrụ kọstọm ahụ chọta unyi n'ụkwụ m n'ọnụ ụzọ ala ndị nwụrụ anwụ. Mgbe m hụrụ gị ọzọ, achọrọ m ka afọ m meghee na ọ joyụ. Ugbu a, bịakwute m ihe ga-atọ Chineke ụtọ.
Kedu onye m ga-eme ka m ghara ịla n'iyi n'ụwa?
Hapụnụ, ndị enyi ikpeazụ gị. Jikọọ Abomey ebe nnabata ọhụrụ na-ekwe nkwa inwe mmekọrịta dị mma, ndụ na-azọpụta ma, o yiri, nnwere onwe. N'ebe ahụ, a na-ekwu na enweelarị ọṅụ ịmaliteghachi. N'ebe ahụ, o yiri ka ndị ọcha ga-adịrị gị mma dị ka mmiri ozuzo nke na-agbazi velvet na-acha ọkụ ọkụ ma ọ bụ anyanwụ nke na-achazi ajị agba nke ntị.
Ndi ibe enwetaghị ya, ndị dike a na-amaghị ama banyere epic dị egwu, nke a bụ onyinye ncheta: obere mmanụ, obere ntụ ọka na ọbara oke ehi. Nke a bụ mmegharị ọhụụ tupu nnukwu ọpụpụ.
Farewell, ndi agha, ijela!
Guédébé na-anọgide na-eguzo, dị ka m, dị ka nwoke nweere onwe ya. Ebe ọbara nke ndị agha ahụ gburu gburu nkwa mbilite n'ọnwụ nke Danhome, a ga-awụfu ọbara ahụ. Ndị nna ochie enweghịzị ihe ọ bụla gbasara àjà anyị. Ha ga ato uto ezigbo nsopuru nke obi ndi kwesiri ntukwasi obi di n'otu maka idi nma nke obodo.
Nke a bụ ihe kpatara m ji kwenye itinye onwe m ogologo abalị nke ndidi ebe chi ọbụbọ nke ọkụ na-amị mkpụrụ.
Guedbe, dịka onye ozi nke udo, na-aga Ghoho, bụ ebe a na-ama ụlọikwuu General Dodds.
Gaa gwa onye mmeri ahụ na ọ naghị eburu shark ahụ.
Gaa gwa ya na echi, n'ehihie, nke nnwere onwe onwe m, agara m obodo nta Yégo.
Gaa gwa ya na m kwenyere, maka nlanarị nke ndị m, izute na obodo ya, dịka nkwa ya si dị, onye isi ala French.
Ọjụjụ ịjụ ịchị ọchịchị n'alaeze ochie nke Danxome (mpịakọta 2): 1894-1900 - Gbehanzin et ...
3 ọhụrụ site na .34,00 XNUMX
1 ejiri site na € 48,83
Zụta € 34,00
Emelitere ikpeazụ na Machị 5, 2021 1:02 PM
Ndụ na echiche nke Ahmed Baba (1556-1627)
Maât - cipleskpụrụ nke ndụ (vidiyo)
Adindra: Ihe odide West Africa bụ nke na-eme ka a mara amamihe amamihe